23 | January | 2019 | Danya Wadi
By danyawadi January 23, 2019 Leaveacomment
ရခိုင်​ပြည်​ရှိမူစလင်​များသည်​ ၁၉၃၆ ခု မှ ၂၀၁၀ ခုနှစ်​ထိ မြန်​မာနိုင်​ငံ တွင်​ပြုလုပ်​သမျှ ​ရွေးကောက်​ပွဲတွင်​ မဲထည့်​ခွင့်​၊ ​ရွေးချယ်​ခွင့်​ရှိပြီး၊ ၂၀၁၅ တွင်​ ပြုလုပ်​​သော​ရွေး​ကောက်​ပွဲတွင်​ မဲထည့်​ခွင့်​ ​ရွေး​ကောက်​ ခံခွင့်​ကို ဥပ​ဒေ ပြဌာန်းပြီး မဲထည့်​ခွင့်​၊ ​ရွေးချယ်​ခံခွင့်​၊ အခွင့်​အ​ရေးကို ပိတ်​ပင်​ခဲ့သည်​။ 1936 / 1946 elected members ​ကိုယ်​စားလှယ်​များ 1951 / 1956 / 1960 elected members ကိုယ်​စားလှယ်​များ 1978 / 1990 / 2010 elected members ကိုယ်​စားလှယ်​များ ROHINGYA MEMBERS OF PARLIMEN OF MYANMAR (BURMA) Year. Post. Name. […]
နေပြည်တော်၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၃ ရက်(ဆင်ဟွာ) တရားသူကြီး၊ အမှုသည်နှင့် သက်သေများ တရားခွင်တွင် ကျမ်းသစ္စာကို တိကျ လေးနက်စွာ ကျိန်ဆိုရေး အဆိုအား အမျိုးသား လွှတ်တော်က လက်ခံဆွေးနွေးရန် ယနေ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေး၌ ကန့် ကွက်သူမရှိ သဘောတူခဲ့သည်။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) အမျိုးသား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုးမိုး တင်သွင်းသည့် “ပြည်သူများ ယုံကြည် ကိုးစား အားထားပြီး ဖြောင့်မတ် မှန်ကန် မျှတသည့် တရားစီရင်ရေး ဖြစ်ထွန်းစေရန် တရားသူကြီး၊ အမှုသည်နှင့် သက်သေများ တရားခွင်တွင် ကျမ်းသစ္စာကို တိကျ လေးနက်စွာ ကျိန်ဆိုရေး” ဟူသည့် အဆိုကို လက်ခံ ဆွေးနွေးရန် ယနေ့ကျင်းပသော ဒုတိယ […]